June 2017 - Ceelhuur Online
June 29, 2017 admin238
Wasiirka Arimaha dibada Norway Borge Brende ayaa gaaray Magaalada Muqdisho, waxaana garoonka kusoo dhaweeyay masuuliyiin katirsan dowlada uu horkacayay Wasiirka Arimaha dibada Somalia.. Wafdiga uu hogaaminayay Wasiirka arimaha dibada dalka Norway ayaa loo galbiyay xarunta Madaxtooyada, waxa uuna halkaasi kulamo kula leeyahay Madaxda sare ee dalka gaar ahaan Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo Madaxweyne Farmaajo. Kulanka […]
June 28, 2017 admin221
In kabadan afar meeloodow meel ka mid ah dadka dunida ayaa bil kasta isticmaala Facebook, sida ay sheegtay bartaasi ay bulshadu ku xiriirto. “Subaxan saaka ah laga billaabo bulshada Facebook isticmaasha labo bilyan ayay noqdeen,” ayuu soo qoray Mark Zuckerberg oo ah ninka aasaasay Facebook oo madaxdana u ah. Arrintan ayaa imanaysa markii uu Zuckerberg […]
Akhriso: Maxa looga hadlay Kulankii dhexmaray Farmaajo iyo Museveni
June 24, 2017 Cali Yare211
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Uganda Mudane Yoweri Kaguta Museveni ayaa caawa kulan ku yeeshay magaalada Kampala. Madaxweynayaasha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Uganda sida wanaagsan ee ay usoo dhaweeyeen […]
June 24, 2017 Saadaq Laki210
Hay’ada Qaramada Midoobey dhinaca caruurta u qaabilsan ee UNICEF ayaa sheegtay cunto la’aan tii ugu darneyd in ay wajahayaan caruurta ku nool dalalka Nigeria, Somalia, South Sudan iyo Yemen. Waxa ay sheegtay UNICEF caruur tiro ahaan lagu qiyaasay 5.2 in ay hada wajahayaan nafaqo-xumo, gaajo, harraad iyo cudurro, loona baahan yahay in si deg deg ah wax […]
June 24, 2017 Saadaq Laki286
Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute Guddoomiyaha Darajada Koowaad ee Maxkamada Ciidamada qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xukunada ay fuliso Maxkamada iyo wadooyinka ay maraan. Waxa uu sheegay in Xukumadaas oo maro wadao sharci ah kuu ku saleysan diinta Islaamka islamarkaana ay tahay wax been abuur ah dadka qaar ee go’aaamda Maxkamada ku […]
June 24, 2017 admin202
Wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed Mudane Xasan Cabdi Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan go’aanka dowladda Mareykanka ee loogu saaray liiska Argagaxisada Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo deegaan ahaan kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaliya. Xasan Cabdi Maxamed ayaa sheegay in Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur uu yahay shaqsi dhex-dhaaxd […]
Sacuudiga Waxaan fashillinay weerar lala damacsanaa masaajid ku yaalla Maka
June 24, 2017 Saadaq Laki243
Wasaarada arrimah gudaha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay fashiliyeen waxa ay ku tilmaameen argagixiso qorshaynaysay in ay bartilmaameedsadaan misaajidka barakaysan ee Makka. Wasaarada arrimaha gudaha ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in dhisma uu ku jiray qofka weerarka fulin rabay ay ciidammada isku gadaameen kadibna uu is qarxiyay. Dhismaha […]
June 24, 2017 admin226
Mareykanka ayaa liiska Argagixisada ka saaray Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa VOA-da u xaqiijisay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka, taasi oo shaacisay in Abuu Mansuur laga saaray liiska Argagixisada Caalamiga. Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa xilal badan ka soo qabtay Al-shabaab, waxaana ka […]
June 24, 2017 June 24, 2017 Cali Yare481
Magalaada Muqdisho waxaa si badan wadooyinkeeda u taagan uguna hoyda lo’ waydey jacaylkii iyo daryeelkii ay heli jirtey. Maanta way cabanaysaa hadday heleyso cid dhagaysata. Sac baan ahay…..Muqdishaan ku noolahay, maxaa iga taqaan, maalin walba waa I aragtaa, dareen aan necbaasho ahayn iima lihid, hoygeygu waa wadooyinka laamiga iyo xaafadaha, cuntadaydu waa taadoo kale, […]
June 23, 2017 Saadaq Laki220
Wararka ka imaanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose Koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhacday Duqeyn ay fuliyeen Diyaarado dagaal. Duqeyntan oo la sheegay in ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamo cadaan ah iyo Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa waxa ay beegsadeen saldhiyo ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin […]